Tandrovy ny teny malagasy: fanagasiana, anaran-tsamirery | Hevitra MPANOHARIANA
Tandrovy ny teny malagasy: fanagasiana, anaran-tsamirery
2008-04-25 @ 05:08 in Ankapobeny
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin’ilay lalao iraisan’ny mpamaham-bolongana teny malagasy mitondra ny lohateny amin’ny ankapobeny manao hoe : “Aza ampijaliana ny teny malagasy”. Na dia efa elaela ihany aza izy io no natomboka ataoko fa mbola ao anatin’ny iray volana fanatanterahana azy indrindra aho amin’izao fotoana izao. Na tratra aoriana aza moa tsy mampaninona izany fa fanabeazam-boho ny fahalalàna ny teny malagasy rahateo.
Miompana amin’ny anaran-tsamirery ny bolongako amin’ity taranja ity. Asa na noho ny tsy fahalalana na noho ny fahadisoana fanaon’ny haino aman-jery omban-gazety matetika fa betsaka ihany izany fahadisoana amin’ny anaran-tsamirery izany. Ny olana angaha dia ny mety ho fanagasiana ny teny vahiny. Raha manoratra ny anaran’i Europe amin’ny teny malagasy aho ohatra dia misolo o ny u amin’ny ankapobeny. Noho izany dia lasa Eoropa no fanoratra azy. Toy izany ihany koa ny amin’ny Eucharistie lasa Eokaristia, ary satria moa tsy misy u ny soratra Economie dia mijanona ho ekonomia izany fa tsy lasa eokonomia tsy akory. Ny Euclidien lasa Eoklidiana ( Eoklideo aza saingy...) fa tsy Eklidiana.
Ny mampihomehy amin’ity raharaha ity indray raha eny antenantenany no misy ny “eu” dia tsy mety voapetraka ny fenitra tokony ho izy. Raha mandray ny Recteur na docteur na professeur isika dia misy ny fisaritahana. Recteur lasa rektora amin’ny ankapobeny (noho ny teny hoe rectorat ve?) nefa ny docteur lasa manao hoe dokotera (nefa misy tsara ny teny frantsay manao hoe Doctorat fa tsy docterat); hany ka samy lasa mety avokoa ny ny profesora na ny profesera. Nefa dia manavia antsika indray na ny hanoratra na ny hamaky izany teny hoe dokoteora na rekteora na profeseora izany raha jerena izay efa nosoratako eo ambony.
Manaraka izany amin’ny anaran-tsamirery ihany, noho ny fifanarahana amin’ny ankapobeny eo amin’ny fanoratra sy famaky ny teny malagasy fa moana ny zanatsoratra farany ankoatra ny teny mivany tokana,ankoatra ny zanatsoratra e dia tsara kokoa raha zanatsoratra roa mifanaraka no mamarana ny anarana manana tsindrim-peo any amin’ny faran’ny vaninteny. Ohatra raisiko voalohany ny anarana Tirike dia tsy vakiana akory ny zanatsoratra e farany fa toy ny mamaky azy hoe “tirk” ihany ianao. [manomboka amin'ny soramandry moa dia efa misy io voalazan'i eprom io fa hoy aho hoe tsara kokoa raha...: Noho ny izany raha manoratra ny Japonais ianao dia tsara ny manoratra azy hoe Japoney (na japonea saingy tsy fahita loatra) fa tsy Japone satria raha ity farany dia lasa toy ny mamaky hoe Japonn ihany ianao. Toy izany ihany koa raha Malais mizotra ho Maley fa tsy male na Gabonnais lasa Gaboney na Gabonea fa tsy Gabone. Na Srilankais lasa srilankey fa tsy srilanke. Ireo roa ireo ihany no tsaroako eto ampanoratana nefa ataoko fa mety ihany io anjara birikiko io, amin'ny anarantsamirery avy amin'ny teny vahiny io].
Nefa misy koa ny somary mahatsikaiky ahy manokana, misy ny teny hoe materiel ary misy ny teny hoe logiciel, ahoana ny soso-kevitra amin’ny fanagasiana ireo hoy ianao? Materialy sy lozisiely satria misy ny tsy mety manaiky ny teny hoe rindrambainga sy rindrambaiko (DotMG moa nanitsy hoe rindrankajy ary efa izay ihany koa no nosoratako teto voalohany saingy voatery nanova ihany aho noho ny torohevitry ny mpahay manokana ny teny malagasy [Di... na Rahaingoson Henri]).